कक्षा ११ र १२ गणित अब अनिवार्य समूहमा | Hindu Khabar
काठमाडौं । अन्ततः गणित विषयलाई कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा अनिवार्य समूहमा राखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले गणितलाई अनिवार्य समूहमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
अब विद्यार्थीले गणित र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षामध्ये एउटा विषय रोज्न पाउनेछन् । बैठकले तेस्रो अनिवार्य विषयमा गणित लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
परिषद्को निर्णयअनुसार विद्यार्थीले गणित र सामाजिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगीमध्ये एउटा विषय रोज्न पाउनेछन् । ११ तथा १२ का विद्यालयले तेस्रो अनिवार्य विषयका रूपमा गणित वा सामाजिक तथा जीवन उपयोगीमध्ये एउटा अध्यापन गराउनुपर्नेछ । यसअघि तेस्रो अनिवार्य विषयका रूपमा सामाजिक तथा जीवन उपयोगी विषय मात्रै रहेको थियो ।
यसअघि गणितलाई ऐच्छिक विषयमा राखिएपछि गणित अध्येताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नेपाल गणित समाजले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।
गणित विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने भन्दै उत्पन्न भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले रिट खारेज गरे पनि सरकारलाई त्यसबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
समाजका सचिव डा. दिनेश पन्थीले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम प्रारूपमा गणितसम्बन्धी रहेको समस्या गणित समाजको निरन्तर माग र दबाबबमोजिम भएको भन्दै अभियानमा जोडिने सबैलाई धन्यवाद दिए ।
समाजका सहसचिब डा. जीवन काफ्लेले यो निर्णयले कक्षा ११ र १२ का झन्डै ४ लाख ५० हजार विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषयको सम्बोधन भएकामा सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले भने, ‘विगत तीन वर्षदेखि गणितसँग जोडिएको अभियानले सार्थकता पाएको छ । यो अभियानमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’
गणित अध्येता एवं विद्यार्थी गणितलाई अनिवार्य विषयबाट हटाइएको भन्दै विगत तीन वर्षदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
विगतमा नेपाली, अंग्र्रेजी र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइएको थियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ल्याएको नयाँ पाठ्यक्रममा ११ र १२ कक्षामा गणित अन्य विषयमा राखिएको थियो । तर अब सो विषय ऐच्छिकमा समावेश गरिएको छ । यस्तै बैठकले प्रारम्भिक बाल शिक्षा (ईसीडी), कक्षा ६–८ र कक्षा ९–१० का नयाँ पाठ्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ ।
आगामी २०७८ सालको नयाँ शैक्षिक सत्रबाट ईसीडी र कक्षा ६–८ का सबै विद्यालयमा सोअनुसारका पाठ्यपुस्तक अध्यापन गरिनेछ भने कक्षा ९–१० का पाठ्यपुस्तक परीक्षणका रूपमा केही विद्यालयमा पठनपाठन हुनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।